Umzi-mveliso wokuPhakamisa amakhama eCrosby, ababoneleli-China Crosby Ukuphakamisa amakhamandela abavelisi
G-2140 Ingxubevange yeBolt Uhlobo lweAnchor Shackle
I-G-2140 ihlangabezana neemfuno zokusebenza ze-Federal Specification RR-C-271F, Uhlobo lwe-IVA, iBanga B, iCandelo lesi-3, ngaphandle kwaloo malungiselelo afunekayo kwikontraka.
G-2150 Bolt Type Chain amakhamandela.Ibhawunti yentloko yeheksi ebhityileyo – indongomane enephinifa yecotter.Ihlangabezana neemfuno zokusebenza ze-Federal Specification RR-C-271F Uhlobo lwe-IVB, iBanga A, udidi lwesi-3, ngaphandle kwaloo malungiselelo afunekayo kwiikontraka.
G-2130 Bolt Uhlobo lweAnchor Shackle
I-G-2130 Bolt Uhlobo lwe-Anchor amakhamandela kunye nebholithi yentloko encinci - i-nut ene-cotter pin.Ihlangabezana neemfuno zokusebenza ze-Federal Specification RR-C-271F Uhlobo lwe-IVA, iBanga A, udidi lwesi-3, ngaphandle kwaloo malungiselelo afunekayo kwikontraka.
I-G-215 I-Round pin chain chain ihlangabezana neemfuno zokusebenza ze-Federal Specification RR-C-271F Uhlobo lwe-IVB, iBanga A, i-Class 1, ngaphandle kwaloo malungiselelo afunekayo kwikontraka.
G-213 Amakhamandela e-ankile e-Round pin ahlangabezana neemfuno zokusebenza ze-Federal Specification RR-C-271F Uhlobo lwe-IVA, iBanga A, iKlasi 1, ngaphandle kwaloo malungiselelo afunekayo kwikontraka.
I-G-210 Screw pin chain chackles ihlangabezana neemfuno zokusebenza ze-Federal Specification RR-C-271F, Uhlobo lwe-IVB, iBanga A, udidi lwesi-2, ngaphandle kwaloo malungiselelo afunekayo kwikontraka.
I-G-209 Screw Pin Anchor Shackle
I-G-209 Screw pin anchor khackles ihlangabezana neemfuno zokusebenza ze-Federal Specification RR-C-271F Uhlobo lwe-IVA, iBanga A, udidi lwesi-2, ngaphandle kwaloo malungiselelo afunekayo kwikontraka.